ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၁-၅-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၁-၅-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
- မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၃ ရက်အတွင်း ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ဝင်ရောက်လာဖွယ် ခန့်မှန်း click
- ဒုက္ခသည် ၇ ဦးကို အစိုးရ နယ်ခြားစောင့်တပ်မှ ဖမ်းဆီးသွား click
- KIO ဒုက္ခသည်စခန်းအားလုံးအတွက် မူကြိုကျောင်း ဆရာဖြစ်သင်တန်း ပြုလုပ် click
- ပြန်ပေးသည့် လယ်မြေစာရင်း စစ်တပ်မှ အကြောင်းပြန် ပေးပို့မှု မရှိ click
- လှိုင်သာယာ ဟုတ်ချိန်ပီနံအိတ်စက်ရုံ အလုပ်သမားများ လစာတိုးရေး ဆန္ဒပြ click
- ထောင်ကြွေးကျန် ကျခံစေခြင်းသည် ခြိမ်းခြောက်မှုဟု ဆို click
- စုံစမ်းရေးကော်မရှင်နှင့် ကော်မတီများတွင် ပါဝင်သူများကို လုပ်ပိုင်ခွင့် ပိုပေးဖို့ ကော်မတီဝင်များ ပြော click
- ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဆင်ရေးဟာ ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအတွက် ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော (ရုပ်သံ) click
- အစိုးရနှင့် ဆွေးနွေးရမည့် အချက်များ DKBA ပြင်ဆင် click
- ဂျပန်အစိုးရထံ တင်ပြတောင်းခံမည့် အကူအညီများအတွက် UNFC ညှိနှိုင်းနေ click
- မဒေးကျွန်းဒေသခံများ တောင်းဆိုချက်အတိုင်း တရုတ်ကုမ္ပဏီက လမ်းစဖောက် click
- မဒေးကျွန်းအရေး ရှေ့နေကွန်ရက်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့များ သွားကူမည် click
- အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါး ကျပ်ငွေ သန်း ၅၁၁ ဖိုး ဖမ်းဆီးခဲ့ click
- ရန်ကုန်ကို လူ ၁၀ သန်း နေထိုင်နိုင်အောင် ဆောက်မည် click
- ပြည်ထောင်စုရိပ်သာစီမံကိန်း ထူးကုမ္ပဏီမှ ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ ရင်းနှီးမည် click
- သီလဝါဆိပ်ကမ်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအဖွဲ့ချုပ်မှ ပိုင်ဆိုင်သည့် ဆိပ်ကမ်း တည်ဆောက်ခွင့်ပြု click
- ဝါရာဇွတ် မီးဘေး ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကူညီရန် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဆုံးဖြတ် click
- ရန်ကုန်မြို့မှာ Parkson FMI ကုန်တိုက် ဖွင့်လှစ်၊ လူလတ်တန်းစားများကို ပစ်မှတ်ထားဟု ဆို (ရုပ်သံ) click
- MAPCO အစုရှယ်ယာ အရောင်း ခေတ္တပိတ်မည် click
- အိမ်အကူများ မကြာခဏ နှိပ်စက်ခံရမှု များပြားလာသဖြင့် ထိရောက်သော အကာအကွယ် လိုအပ် click
- ဈေးကွက်အတွင်းရှိ ဆေးဝါးအချို့ သတိပြု သုံးစွဲရန် ဝါရင့်ဆေးပညာရှင်များ အကြံပြု click
- ပန်းချီဝသုန် အမှတ်တရ ပြပွဲတွင် အခြားပန်းချီဆရာကြီးများ၏ လက်ရာများ ပါဝင် click
- ဘရာဇီးရုပ်ရှင်ပွဲတော် ဇာတ်ကား ၄ ကား ရန်ကုန်တွင် အခမဲ့ ပြသ (ရုပ်သံ) click
- ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဆောင်များ သုံးပုံတပုံ ပြင်ဆင်ပြီး click
- နိုင်ငံတကာ ပုဂ္ဂလိကကျောင်း ISM နှင့် ကျောင်းသားမိဘများကြား အငြင်းပွား click
- ကျောင်းသားကိုယ်တိုင်ပါသော ဝန်ဆောင်မှုဌာနများ တက္ကသိုလ်တိုင်းတွင် ဖွဲ့မည် click
- ကိုယ့်ထက် သာသူများထံမှ သင်ယူပါ (သူ့အမြင်) click
- ၉ နှစ်သားအရွယ် ကလေးငယ်တဦးက ပေးခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာ (ဆောင်းပါး) click
- စာမူနှစ်ခုနဲ့ ပအိုဝ်းစာပေ ဘယ်လဲ click
- Rainbow သတင်း (မေလ ဒုတိယအပတ်) click
YCDC ရဲ. ကန်ထရိုက်တိုက်များ လူနေထိုင်ခွင်.ရဖို. မီးသတ်ဌာန ထောက်ခံ ချက်တင်ပြရမယ်ဆိုတဲ. ဥပဒေထုတ်ပြန်ခဲ.ပါတယ် ၊ ဒါပေမယ်. မီးသတ်ဌာန က ထောက်ခံချက်ကလည်း ၅ လလောက်ကြာတာ မို. ယာ/အုံ ဌာနမှ စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီး
နေရတဲ. ကန်ထရိုက်တိုက် အများအပြား ဖြစ်နေပါတယ် ။
ဒီအခက်အခဲ အား မြို.တော်စည်ပင်ဌာနမှ ဖြေရှင်းကူညီပေးပါ ရန် မေတ္တာရပ်ခံပါ သည် ။ ။